Banaan bax looga soo horjeedo dilkii Gudoomiye kuxigeenkii degmada Yaaqshiid oo Muqdisho ka dhacay (Sawirro) | Salaan Media
Banaan bax looga soo horjeedo dilkii Gudoomiye kuxigeenkii degmada Yaaqshiid oo Muqdisho ka dhacay (Sawirro)
Boqolaal Haween ka kala socday degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa maanta sameeyay isu soo bax loogu baroor diiqyay Gudoomiye kuxigeenkii degmada Yaaqshiid Raxmo Dahir Siyaad ayaa maanta ka dhacay daljirka Dahsoon, iyado haweenkii ka qeyb galay ay socod ku mareen wadada.
Haweenkii isugu soo baxay ayaa watay boodhadh ay ku qornaayeen halku dhigyo kala duwan oo lagu muujinayay sida looga soo horjeeday dilka Gudoomiye kuxigeenkii degmada Yaaqshiid oo 17-kii bishan la dilay, waxaana mas’uuliyiintii ka hadashay ay ku baaqeen in ammaanka wax laga qabto.
Isu soo baxaan baroor-diiqa ah oo ay soo qaban qaabiyeen Maamulka gobolka Banaadir oo ay horkaceysay Gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Hay’adda CCD oo gacan ka geysatay.
Ugu horeyn waxaa ka hadashay isu soo baxa Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqab oo sheegtay in dilka Raxmo Dahir Siyaad ay dishay gacan ka gardaran, iyadoo gudaneysay waajibaadkeeda qaran, waxayna tilmaamtay in taariikhda ay xusi doonto.
Gudoomiyaha Gudiga Xuquuql Insaanka Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibanad Khadiijo Maxmed Diiriye ayaa sheegtay in Geeridu ay xaq tahay, balse Marxuumad Raxmo ay dishay gacan ka gardaran, iyadoo sheegtay in cidii ka damabeysay la soo taagi doono Maxkamad cadaalad ah si loo waafajiyo sharciga.
Xildhibanad Khadiijo waxaa kaloo ay sheegtay in marxuumad Raxmo ay aheyd halyeey qaran dawladana aysan si fudud u ilaabi doonin, iyadoo dhinaca kalana xustay in ka baarlamaan ahaan ay mar walba la socon doonaan dabagalna ku sameyn doonaan cidkasta oo ku lug yeelata dilka Gudoomiye kuxigeenka.
Gudoomiye Kuxigeenka Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyed Canab Xasan Cilmi ayaa sheegtay in haddii ay yihiin Ururka Qaranka Haweenka Soomaliyeed ay aad iyo aad uga xun yihiin in dilka loo geestay Marxuumad Raxmo Dahir Siyaad.
Canab Xasan Cilmi ayaa ugu baaqday madaxda dowladda iyo hey’adaha ammaanka inay wax ka qabtaan ammaanka magaalada, isla markaana la soo qabto kooxaha dilalka ka geysanaya magaalada ee bastooladaha dadka ku leynaya.
Gudoomiyaha Hey’adda wada hadalka Bulshada ee CCD Ciise Axmed Cumar oo ka hadlay banaan baxa ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dilkii loo geystay Gudoomiye kuxigeenkii degmada Yaaqshiid, isagoo hoosta ka xariiqay inay ay aheyd haweeney aad iyo aad u firfircoon bulshadeedana ugu adeegeysay si hagar la’aan ah, waxaana uu ugu baaqay dawladda Federaalka soomalaiyeed inay ka qaado talaabo sharciga waafaqsana cidkasta ee ka dambeysa dilkeeda.
Xoghayaha guud ee Gobolka Banaadir C/kaafi Hilowle Cismaan ayaa ku baaqay in la soo qabto kooxaha dilalka ka dambeeya, isagoo cod dheer ku sheegay in kooxaha dilka ka dambeeya xabsiyada laga soo gato oo aanay jirin cid cadaalada horkeentay kuwa dilalka ka geysta magaalada sida uu yiri.
Waxaa kaloo ka hadlay banaan baxa qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, Gudoomiyaha Ururada Haweenka Gobolka Hiiraan iyo Shabellaha Hoose, kuwaasoo muujiyay sida ay uga xun yihiin dilka haweeneydii Gudoomiye kuxigeenka ka aheyd degmada Yaaqshiid.
Banaan baxan looga soo horjeeda dilka gudoomiye kuxigeenkii degmada Yaaqshiid ayaa ku soo beegmaya, iyadoo ammaanka magaalada uu sii xumaanayo, isla markaana ay dilal qorsheysan ay ka dhaceen maalmihii u dambeeyay, kaasoo dad ka badan 10-ruux siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda.